DF oo ka hadashay dagaal ka socda gobolka Shabeelaha dhexe | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo ka hadashay dagaal ka socda gobolka Shabeelaha dhexe
Afhayeenka ciidanka xoogga Gaashaanla Sare Cali Xaashi Cabdi ayaa ka warbixiyay dagaallo ka socda gobolka Shabeelaha dhexe oo u dhaxeeya ciidamda dowladda iyo kuwa ururka al-Shabaab.
JOWHAR, Soomaaliya - Afhayeenka ciidanka xoogga Gaashaanla Sare Cali Xaashi Cabdi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay kaga hadlay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobolka Shabeelaha dhexe oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka iyo kuwa kooxda Al-Shabaab.
Afhayeenku wuxuu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen degaanno hoos taga Gobolka Shabeelaha dhexe dagaallo qaraar oo u dhaxeeya iyaga iyo kuwa kooxda Al-Shabaab, waxa uu sheegay in dagaalladaasi ay guulo kasoo hoyeen ciidanka xoogga dalka oo la wareegeen degaanno badan oo laga xoreeyay kooxda, isagoo isdoo kale xusay in ay jiraan khasaaro xooggan oo soo gaaray Al-Shabaab. Wuxuu qiray in dagallada ay socdaan weli, maalinkii labaadna ay galeen.
Degaanada loo yaqaan Waaraxley, Cali fooldheere iyo Qurac-madoobe oo ah dhulk keyn ay ayuu hadda kasocdaa dagaalka sida uu sheegay afhayeenka, "Waxaa lagu dilay 17 dagaal-yahan oo ka tirsan kooxda nabad diidka Al-Shabaab, haddana dagaalka wuu socdaa, waxaana ka go'an ciidamada xoogga in ay cadawgaas ka xoreeyaan gobollada Soomaaliya oo dhan" ayuu yiri Gaashaanle Sare Cali Xaashi Cabdi oo ah afhayeenka ciidanka xoogga.
Afhayeenku waxaa kale ee uu sheegay in ay jiraan hub lagala wareegay kooxda dagaalladii hore, balse dagaalka haatan ka socda ayuu sheegay in uu yahay mid ka socda dhul keyma ah, waxaana lagu garaacay hoobiye-yaal sida uu afhayeenku sheegay. "Dadka deggan degaannadaasi dagaalka ka socdo waa looga digay in ay ka fogaadaan meeshaas, maadaama hoobiyeyaal lagu garaacay dhulkuna uu yahay dhul keymo ah" ayuu intaas raaciyay.
Ugu dambeyntii wuxuu sheegay in dagaalka ay qeyb ka yihiin ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka Booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxa uuna sheegay in ay gaareen guulo, isagoo xusay in dib laga soo sheegi doono tirada rasmiga ah ee khasaaraha gaaray kooxda, lana soo bandhigi doono hubka iyo meydadka kooxda.